Koboca Muslimiinta Yurub | Somaliska
Tirada Muslimiinta ku nool qaarada Yurub ayaa kor u kacday 20-kii sano ee la soo dhaafay 14.5 milyan, iyadoo la filayo in 20-ka sano ee soo socda ay sidoo kale tiradaas kor u kacdo 14 milyan oo qof, sida lagu soo bandhigay cilmi baaris uu sameeyay ururka PEW. Guud ahaan tirada Muslimiinta ku nool qaarada Yurub ayaa lagu qiyaasaa 44 milyan iyadoo la filayo sanadka 2030 in ay tiradaas noqoto 58 milyan. Balse koboca Muslimiinta Yurub ayaa ka liita mida uu sameynayo Muslimiinta ku nool daafaha aduunka (oo la filayo in ay kor u dhaafaan 2 bilyan sanadka 2030) iyadoo taas sabab looga dhigay haajiraada Muslimiinta ay u soo haajirayaan Yurub oo hoos u dhacaya iyo dhalmada. Muslimiinta Yurub ayaa intooda badan ku nool bariga balse waxaa la filayaa 20 sano ee soo socda in tirada Muslimiinta ku nool galbeedka Yurub sida wadamada UK, France, Germany iyo Sweden in ay kor u kaco. Koboca Muslimiinta Yurub ayaa cabsi ku haaya cunsuriyiinta Yurub maadaama dadka reer Yurub ee aan Muslimiinta ahayn ay hoos u dhacayaan. Sanadka 2030 ayaa la filayaa in Muslimiintu ay noqdaan 8% shacabka Yurub halka ay maantaa yihiin 6%. Si kastaba ha ahaatee Muslimiinta ku nool Yurub ayaa marka loo barbar dhigo Muslimiinta caalamka waxay noqonayaan cirbad bada la dhexdhigay oo waa 3% oo keliya.
Koboca Muslimiinta Yurub
Tirada Muslimiinta ku nool qaarada Yurub ayaa kor u kacday 20-kii sano ee la soo dhaafay 14.5 milyan, iyadoo la filayo in 20-ka sano ee soo socda ay sidoo kale tiradaas kor u kacdo 14 milyan oo qof, sida lagu soo bandhigay cilmi baaris uu sameeyay ururka PEW.
Guud ahaan tirada Muslimiinta ku nool qaarada Yurub ayaa lagu qiyaasaa 44 milyan iyadoo la filayo sanadka 2030 in ay tiradaas noqoto 58 milyan. Balse koboca Muslimiinta Yurub ayaa ka liita mida uu sameynayo Muslimiinta ku nool daafaha aduunka (oo la filayo in ay kor u dhaafaan 2 bilyan sanadka 2030) iyadoo taas sabab looga dhigay haajiraada Muslimiinta ay u soo haajirayaan Yurub oo hoos u dhacaya iyo dhalmada.
Muslimiinta Yurub ayaa intooda badan ku nool bariga balse waxaa la filayaa 20 sano ee soo socda in tirada Muslimiinta ku nool galbeedka Yurub sida wadamada UK, France, Germany iyo Sweden in ay kor u kaco.
Koboca Muslimiinta Yurub ayaa cabsi ku haaya cunsuriyiinta Yurub maadaama dadka reer Yurub ee aan Muslimiinta ahayn ay hoos u dhacayaan. Sanadka 2030 ayaa la filayaa in Muslimiintu ay noqdaan 8% shacabka Yurub halka ay maantaa yihiin 6%.
Si kastaba ha ahaatee Muslimiinta ku nool Yurub ayaa marka loo barbar dhigo Muslimiinta caalamka waxay noqonayaan cirbad bada la dhexdhigay oo waa 3% oo keliya.
12 Gudoomiye degmo oo warqad u qoray dowlada ku saabsan Soomaalida